ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: September 2009
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာဟာ ကော်ဖီကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်. . ကော်ဖီနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို ပြောကြသလို အမျိုးမျိုးလည်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်. . တချို့ ကကော်ဖီမှာ ကဖိန်းဓာတ်ပါလို့ အာရုံကြောကို ဒုက္ခရောက်စေတယ်လို့ ဆိုကြတယ်. . .မကြာသေးခင်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာများထဲတွင် ကော်ဖီနှင့်ပက်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးတွေပါလာပါတယ်. . ကော်ဖီဟာရောဂါကြီးတွေကိုတောင် သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်. . စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းပြီး ကျန်းမာစေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်. .
အရင်ကတော့ ကော်ဖီဟာ နှလုံးကို အားနည်းစေတယ် . . နှလုံးမကောင်းဘူးလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြတယ်. . . လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀က ဆိုရင် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို ဥရောပကလုပ်ကြပြီး ကော်ဖီပြင်းပြင်းသောက်ရင် ကိုလက်စထရော အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ပြောကြတယ်. . . သုတေသီတွေကလည်း အမျိုးမျိုး ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါတယ်. . အဲဒီအခါမှာ ကော်ဖီကို ပုံမှန်သောက်မယ် အလွန်အကျွံ့မဟုတ်ဘဲ အသင့်အတင့် သောက်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ သွေးတိုးစေမှုကို အန္တရာယ် မဖြစ်ဘူး . . သွေးတိုးရောဂါလည်း မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် . . ဒါ့အပြင် သွေးခုန်နှုန်း မမှန်တာတွေကို မှန်အောင် အားပေးတယ်. . ကျန်းမာရေး ကောင်းတဲ့ သူတွေဖြစ်အောင် ကော်ဖီကအကျိုးပြုပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ် . . ကော်ဖီကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခုမှဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က မိယာစတင်ဖာက ပြောပါတယ်. . ကော်ဖီသောက်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်တာ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာလည်း သိရှိလာရပါတယ်. . .
ပါကင်ဆန်ခေါ် ခြေတုန်လက်တုန်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
ယခုအခါ ကော်ဖီရဲ့ အာနိသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသစ်တွေ့ရှိတာက အသက်ကြီးတဲ့ အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပါကင်ဆန်ခေါ် ခြေတုန်လက်တုန်ရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသလို မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကနေဒါက ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေဟာ သားပျက်ကျတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ၃၆% ဟာ တစ်နေ့ကို ကေ်ာဖီနှစ်ခွက်သောက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်. . သူတို့ဟာ ကော်ဖီမသောက်တဲ့ မိန်းမတွေထက်ပိုပြီး အဖြစ်များတာ တွေ့ရတယ်. . . ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ကလေးကျန်းမာရေး အမျိုးသားဌာနက ဒေါက်တာ မက်ကလေဘာနော့က ဒီအဆိုဟာ မသေချာပါဘူး. ကော်ဖီမသောက်ဘဲနဲ့လည်း သားပျက်ကျတဲ့ မိန်းမတွေ အများကြီးရှိတယ်. . . ကော်ဖီသောက်လို့သားပျက်တယ်ဆိုတာကတော့ အခုအချိန်ထိ အသေအချာ ပြောလို့မရသေးပါဘူး ကော်ဖီကို တစ်နေ့ ၅ခွက်၊ ၆ခွက် အလွန်အကျွံ့သောက်တဲ့ သူတွေကတော့ သားပျက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်. . .
၁၉၈၀ ခုနှစ်ကာလတွေတုန်းကတော့ ကော်ဖီသောက်လို့ရှိရင် ပန်းခရိကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်. . . အဲဒါဟာ တမင်ခြောက်လှန့်တာသက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ လုပ်ကြည့်တဲ့ အခါ ကော်ဖီကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်မခံကြပါဘူး နောက်တစ်ချို့လည်း ဆီးအိမ်ကင်ဆာဟာ ကော်ဖီသောက်လို့လည်းပြောပါတယ်. . . ဒီအချက်ဟာလည်း လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ မမှန်ကန်တာကို တွေ့ရပါတယ်. . တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ၁၀ခွက်ကျော် သောက်တဲ့ လူတွေမှာတော့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေတာကို တွေ့ရပါတယ် .. . . ဒါပေမယ့် အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့အခါ ကော်ဖီကြောင့်ဆိုတာကိုတော့ ယနေ့တိုင် မတွေ့ရှိရသေးပါ. . .
ကဖိန်းဟာ အမှန်တကယ်တော့ စိတ်ကြွမှုအားကောင်းစေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်. . . နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ် ကော်မတီက သွေးထဲမှာ ကဖိန်းဓာတ် ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာကို ကန့်သတ်ထားပါတယ် . . . ပြိုင်ပွဲများတွင် စိတ်ကြွဆေး သုံးမသုံး သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါ ကဖိန်းဓာတ် ဘယ်လောက် ပါသလဲဆိုတာလည်း စစ်ပါတယ်. . ကဖိန်းဟာ နိုးကြားပြီး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတယ်. . ကော်ဖီကို လိုအပ်တာထက် ပိုသောက်ကြရင် အိပ်မပျော်ဘဲ လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါတယ်. . ဒါကြောင့် အားကစားသများတွေကို မူးယစ်ဆေး မသုံးရဆိုတာကြောင့် ကဖိန်းဓာတ် ပါဝင်မှုကို ကန့်သတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. .
ကော်ဖီကို သောက်သင့်သလား .
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲက ကလေးကို မွေးတဲ့အခါ နို့တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်. ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကိုယ် ကော်ဖီ ၂ ခွက်သောက်သင့်ပါတယ်. . ၂ ခွက်ထက်တော့ မပိုသင့်ပါဘူး ကော်ဖီအလွန်အကျွံ့သောက်လို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှာလည်း ကြည့်ရပါမယ်. . ကော်ဖီ၂ခွက်ပဲသောက်မယ်ဆိုရင် မိခင်ဟာ နို့ထွက်ကောင်းတယ်. . . ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ စိတ်ချမ်းသာတာ ၊ နှလုံးခုန်တာကိုလည်း ကော်ဖီကထိန်းပေးပါတယ် . . ဒါကြောင့်ကော်ဖီဟာ နေ့စဉ်ကော်ဖီ၃ ခွက်တော့ သောက်သင့်ပါတယ်. .
ကော်ဖီသောက်တာ ဆိုးကျိုးရှိသလို ကောင်းကျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် . . အလွန်အကျွံ့ မသောက်ဘဲ မျှတအောင်ပဲ သောက်ဖို့ လိုပါတယ်..
သုတေသီတစ်ဦး (ကြုံတွေ့နေကျ ကျန်းမာရေး ပြသာနာများအတွက်)
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, September 29, 2009 10 comments:
ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်များဝယ်ယူရန် အလှူငွေလှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင် တစ်ဦးအတွက် ပညာဒါန နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလှူပီတိ အလိုငှာ ပိုစ့်တစ်ခု ရေးပေးပါရန်ဘုန်းဘုန်း
အရှင်ကောဝိဒသိရီ သီတဂူစတားအား လျှောက်ထားတဲ့အတွက် ဘုန်းဘုန်းမှ"ပညာအလှူသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်" ဟူသောပို့စ်ကို ရေးသားချီးမြှင့်ပေးပါသည်။ အလှူရှင်နှင့်အတူ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုကြရအောင်နော်.....
စာပေမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မည်။ လူမျိုးတင့်မှ တိုင်းပြည်မြင့်မည်။ စာပေသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၏ အသက်ဖြစ်သည်။ စာပေထွန်းကားမှ နိုင်ငံထွန်းကားမည်။ စာပေသည် ရတနာမျိုးစုံကို ထည့် သွင်း သိမ်းဆည်းထားသော သေတ္တာတစ်လုံးနှင့်တူသည်။ တန်ဘိုးရှိသော ပညာရပ်မှန်သမျှကို စာပေဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ရာ၌ စာပေကို မျက်ကွယ်ပြု၍ မရနိုင်ပေ။
စာပေသည် အမှောင်နှင့်အလင်း အမှားနှင့်အမှန်ကို ရှင်းလင်း သိနိုင်အောင် ပြသပေးသော မီးရှူးတန်ဆောင် အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့် သာသနာ တိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက် စာပေတည်းဟူသော မီးရှူးတန်ဆောင်ကို အရှိန်အဟုန် မပျက် ဆက်လက် ညှိထွန်းနေရမည်ဖြစ်သည်။ စာပေသည် အလင်းတကာတို့ထက် ပိုမို၍ လင်းအားကောင်းသော အရာဖြစ်သည်။ စာပေအလင်းရောင်ကြောင့် တိုင်းပြည်သည် တစ်ခဏချင်း လင်းထိန်သွားနိုင်သည်။ လူမျိုးသည် တောက်ပြောင် နိုင်သည်။ ဘာသာနှင့် သာသနာသည် ထိပ်တမ်းသို့ မြင့်တက်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးသော စိတ်ကို ဖော်ပြသောအားဖြင့် စာပေ အလံတံခွန်ကို အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်အောင် မြှင့်တင်နေရမည်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့် စာပေသည် ပညာရပ်အားလုံးတို့၏ ကိုယ်စားပြု နာမ်စားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာပေကို လိုက်စားခြင်းဖြင့် ပညာရပ်အားလုံးကို တတ်သိနားလည်ပြီး အများအားကိုးထိုက်သည့် အကျိုးပြု ပညာတတ်ကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ စာပေကြောင့် အသိအမြင်နှင့် ဘဝ အခြေအနေ တိုးတက် ပြောင်းလဲ သွားသူများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ မြောက်များစွာရှိသည်။
ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ မြတ်စွာဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါမှတ်သားဘွယ်ရာ နီတိဆန်သော စကားရပ်များကို မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ ၄င်းတို့မှာ-
နတ္ထိ ပညာသမာ အာဘာ နတ္ထိ (သံ၊၁၊၆၊ပါ) လောက၌ ပညာနှင့်တူသော အလင်းရောင် မရှိ။
ပညာ နရာနံ ရတနံ (သံ၊၁၊၃၃၊ပါ) ပညာသည် လူတို့အတွက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာရွှေအိုး။
ပညာ လောကသ္မိံ ပဇ္ဇောတော (သံ၊၁၊၄၁၊ပါ) ပညာသည် လောကကြီးအတွက် အကောင်းဆုံး အလင်းရောင်။
ထို့ပြင် စက္ခုံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇ္ဇာ ဥဒပါဒိ ပညာမျက်စိ၊ အသိ၊ အမြင်၊ နားလည်မှုများရှိလျှင် ဘဝလွတ်မြောက်မှုကို ရနိုင်သည်ဟု အားပါးတရ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အမှောင်ကင်း ပျောက် သော လောကကြီးဖြစ်စေရန် အသိမှန် အမြင်မှန်ပေးနိုင်သော စာပေများကို ဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာ ပြန့်ပွားအောင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သံယုတ်ပါဠိတော်၌ ခွန်အားကောင်းလိုသော် အစာအာဟာရကို လှူ၊ ရုပ်ရည်ကောင်းလိုသော် အဝတ်တန်ဆာကို လှူ၊ မျက်စိကောင်းလိုသော် အလင်းရောင်ကိုလှူ၊ ချမ်းသာကို အလိုရှိသော် ယာဉ်ရထားကို လှူ၊ ၄င်းသုံးမျိုးကို တစ်ပြိုင်နက် ရလိုသော် အရိပ် အာဝါသ ကျောင်း ဇရပ်ကို လှူ။ အသိဥာဏ်ကြီးလိုသော် တရား(ပညာ)ကိုလှူ (သံ၊၁၊၂၉၊ပါ) ဟု မြတ်စွာဗုဒ္ဓမိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အသိဥာဏ်ကြီးလိုက အသိဥာဏ်ကြီးကြောင်း ပညာရပ်များကို ဖြန့်ဝေခြင်း မှတစ်ပါး အခြားနည်းလမ်း မရှိတော့ပေ။ ပညာရပ်ကို ဖြန့်ဝေသည် ဆိုရာ၌ သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ တရားစကား ပြောခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းများအပြင် စာအုပ်စာပေများ ပေး လှူခြင်းများလည်းပါဝင်သည်။
နံရံများ၏ ပဲ့တင်သံများသည် တူသော တန်ပြန်သက်ရောက်မှုနှုန်းများဖြစ်သည်။ အလေး အပေါ့ အကျယ်အကျဉ်း အကောင်းအဆိုး အတိုးအမြင့်သည် မူလဘူတ ပြုလုပ်သူ၏ အင်အားနှင့် များစွာ သက်ဆိုင် သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လောက၌ အရာရာသည် အကြောင်းမဲ့ သက်သက်ဖြစ် နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ အကြောင်းအကျိုး အားဖြင့် နှီးနွှယ် ဖြစ်ပျက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကို ပညာရှိ သူတော်ကောင်းများက ဇနေတိ သဒိသံ ပါကံ (အဘိ၊၃၆)
လောက၌ အရာရာသည် တူသော တန်ပြန်သက်ရောက်မှုနှုန်းရှိသည် ဟု အလေးအနက် မိန့်ကြား တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
ရေးသားသူ may16 at Thursday, September 24, 20095comments:
" ခွင့်လွှတ်ပါ "
အပြစ်ရှိက ၊ ခွင့်လွှတ်ပါ့ ဟု
တစ်ရံခါက ၊ ကြုံခဲ့ကြသည့်
ငါကြံလျှင် မြတ်၊ ငါသာတတ်၍
ငါဖြတ်လေမှ ၊ ပြတ်လေစွဟု
ငါလုံး လှိုင်းထန်ခဲ့သည် အမှန်။
ငါလိုလျှင် ရ၊ ငါတ လျှင် ပိုင်
ငါပြိုင်လေက ၊ နိုင်လေစွဟု
ဘ၀ခရီး ၊ငါနှင့် ပြီးကာ
အို. . . မိတ်ဆွေတို့၊
ဘို့ကြီး ကြီးကာ၊ ပိ၍လာမှ
အနတ္တ အစဉ်၊ အတ္တထင်ခဲ့
ကြင်နှင့် ကြဉ်အား ၊ အလိုက်မှားခဲ့
မခိုသာသေး ၊ အေးရိပ်ဝေးကာ
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, September 23, 20096comments:
ရေးသားသူ may16 at Sunday, September 20, 20096comments:
အကျွန်ုပ်သည် ဤသို့ ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း မိဂါရမာတာ ဝိသာခါ၏ ပြာသာဒ်ကျောင်း၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏၊ ထိုအခါ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ညနေချမ်းအချိန်၌ တစ်ပါးတည်း ကိန်းအောင်းတော်မူရာမှ ထခဲ့၍ ကျောင်း အနောက်ဘက် နေပူဆာ၌ ကျောက်ကုန်းကို နေစာလှုံလျက် နေတော်မူ၏။
ထိုအခါ အသျှင်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးလျက် မြတ်စွာဘုရား၏ ကိုယ်တော်ကို လက်ဖြင့် အဖန်ဖန် ဆုပ်နယ် သုံးသပ်လျက် မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်၏-
''အသျှင်ဘုရား အံ့သြဖွယ် ရှိပါပေစွ၊ အသျှင်ဘုရား မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပေစွ၊
အသျှင်ဘုရား ယခု မြတ်စွာဘုရား၏ အရေအဆင်းတော်သည် ရှေးကကဲ့သို့ စင်ကြယ် ဖြူစင်ခြင်း မရှိတော့ပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးတို့သည် လျော့ပါးကုန်သည် ဖြစ်၍ အရေတွန့်လိပ် နေပါကုန်၏၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရှေ့သို့ ကိုင်းရှိုင်းပါ၏၊ စက္ခုနြေ္ဒ၊ သောတိနြေ္ဒ၊ ဃာနိနြေ္ဒ၊ ဇိဝှိနြေ္ဒ၊ ကာယိနြေ္ဒဟူသော ဣနြေ္ဒတို့၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ထင်ပါ၏'' ဟု လျှောက်၏။ အာနန္ဒာ ထိုစကားသည် မှန်၏၊ ပျိုနုခြင်းသဘော ရှိခဲ့သော် အိုခြင်း သဘောရှိ၏၊ ကျန်းမာခြင်း သဘော ရှိခဲ့သော် နာခြင်း သဘောရှိ၏၊ အသက်ရှင်ခြင်း သဘော ရှိခဲ့သော် သေခြင်း သဘောရှိ၏၊ အရေအဆင်းသည် ရှေးကကဲ့သို့ စင်ကြယ် ဖြူစင်ခြင်း မရှိတော့ပေ၊ ခန္ဓာကိုယ် အားလုံးတို့သည် လျော့ပါးကုန်သည် ဖြစ်၍ အရေတွန့်လိပ် နေကုန်၏၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရှေ့သို့ ကိုင်းရှိုင်း၏၊ စက္ခုနြေ္ဒ၊ သောတိနြေ္ဒ၊ ဃာနိနြေ္ဒ၊ ဇိဝှိနြေ္ဒ၊ ကာယိနြေ္ဒဟူသော ဣနြေ္ဒတို့၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ထင်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို ဟောကြားတော်မူပြီး နောက် ထိုမှတစ်ပါး ဤဂါထာကို မိန့်တော်မူပြန်၏ -
''ယုတ်မာလှသော ဟယ်ဇရာတရား သင့်အား စက်ဆုပ်ဖွယ် ဖြစ်ပါစေ၊ အဆင်းပျက်အောင် ပြုလုပ်တတ်သော ဟယ်ဇရာတရား နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောကို ဇရာတရားသည် ဖိစီး နှိပ်စက်လေစွ တကား။
အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှည်သူသည်လည်း သေရခြင်းလျှင် လဲလျောင်းရာရှိ၏၊ သေခြင်းတရားသည် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ မရှောင်ကြဉ်၊ အလုံးစုံသော သတ္တဝါကိုပင် ဖိစီး နှိပ်စက်လေ၏'' ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 511
၁ - ဇရာဓမ္မသုတ်၊ ဇရာဝဂ်၊ မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်။
ဘုန်းဘုန်း ဦးလောကနာထ ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, September 19, 2009 8 comments:
သမင်ထီးတစ်ကောင်ဟာ ရေဆာလို့စမ်းချောင်းကလေး တစ်ခုဆီလာခဲ့တယ်. . . ရေသောက်ပြီးတဲ့အခါ သူ့အရိပ်ကို ရေပြင်မှာ သတိပြုမိတယ်.
ရှည်ပြီး ထူးခြားစွာလှပနေတဲ့ သူ့ ဦးချိုတွေကြောင့် ဂုဏ်ယူနေမိတယ်.. . ဒါပေမယ့် သေးသွယ်ပြီး မလှပတဲ့ သူ့ခြေထောက်တွေကြောင့် အလွန်စိတ်ပျက်သွားလေရဲ့. . .
အဲသလိုဖြစ်နေဆဲမှာ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဟာ ဘွားခနဲပေါ်လာပြီး သူ့ကို လိုက်တာပေါ့. . . . . သမင်ဟာ သူ့ရဲ့မလှပဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်. .
ဒါပေမယ့် သမင်ဟာ ကွင်းပြင်ထဲမှာ အန္တာရယ်ကလွတ်အောင် ပြေးနိုင်ပေမယ့် တောထဲရောက်တဲ့အခါ သူ့ဦးချိုဟာ သစ်ကိုင်းနဲ့ငြိသွားတယ် . . . သူ ဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘူး . . ဒီလိုနဲ့ ခြင်္သေ့ဟာ သူ့ကို မိသွားပါလေရော. . .
သူမသေခင်လေးမှာ သူနောင်တရသွားတာက . . .
" အင်း ငါ့ခြေထောက်ကို စိတ်ပျက်ခဲ့မိတယ်. . . . သူအသုံးဝင်မှန်းခုမှငါသိတယ်. . . ငါအထင်ကြီးခဲ့တဲ့ ဦးချိုကြောင့် ငါဟာ ခြင်္သေ့စာဖြစ်ရတာပါလား . . . " လို့နောင်တတွေရသွားခဲ့ပါတယ်.. .
(မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဘယ်သူဟာ မှန်ကန်သစ္စာရှိမယ်. . . ဘယ်သူဟာ စိတ်မချသင့်ဘူးဆိုတာ လက်တွေ့ကျတော့ သိရတာပဲ. . . အလှအပထက် အသုံးကျမှုကို တန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်. .)
ရေးသားသူ may16 at Thursday, September 17, 2009 10 comments:
နာမည်ကြီးဂေါက်ကွင်းတစ်ကွင်းအနီးရှိ ဆေးရုံကြီး၏ အရေးပေါ် ကုသခန်းရှေ့တွင် ဂေါက်သမားကြီး တစ်ယောက် လူးလားခေါက်တုံ့ဖြင့် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေသည်. . အခန်းထဲတွင်ကား ဆရာဝန်များသည် လည်ချောင်းထဲသို့ ဂေါက်သီးဝင်သွားသည် ဂေါက်သမားတစ်ဦးကို အရေးပေါ်ခွဲစိတ်နေကြ၏
တာဝန်ကျသူနာပြုက ထွက်လာပြီး ဂေါက်သမားကြီးကို နှစ်သိမ့်၏
သူနာပြု - "ပြီးတော့မှာပါရှင်၊ ဘာတော်လည်း၊ ဆွေမျိုးလား. . . "
ဂေါက်သမား- "မတော်ပါဘူးဆရာမ၊ ကျွန်တော့ဘောလုံးကလေး ပြန်ရမလားလို့ စောင့်နေတာပါ. . . "
ယောကျာ်းဖြစ်သူ က ဂေါက်ကို သဲကြီးမဲကြီး ကစားလွန်းတော့ မိန်းမကလည်း ငါ့ယောကျာ်း ဒီလောက်စွဲနေတဲ့ အားကစားကို နားလည်အောင်တော့ လေ့လာထားမှပါလေလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..
မိန်းမ - "အကျောပေးဂေါက်သမားဆိုတာ ဘာလဲဟင်"
ယောကျာ်း - " ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ ရိုက်ရတဲ့ ဂေါက်သမားမျိုးပေ့ါကွာ . . . တဲ့"
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, September 15, 2009 12 comments:
အလုပ်ကြောင့်၊ မိသားစုကြောင့်၊ မိတ်ဆွေတွေကြောင့်၊ ချစ်သူကြောင့် စိတ်ရှုပ် နေသူတွေအတွက် အောက်ပါနည်းလေးတွေကို အသုံးချပြီး လူသစ်၊ စိတ်သစ်နဲ့ သောကတွေကို ဖျောက်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါနော်. . .
- စောစောထ၊ ရေချိုး ၊ စတိုင်ကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ့် ၀တ်စုံကို စမတ်ကျကျ ၀တ်ဆင်ပါ.
- လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် စိတ်ညစ်တာတွေ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ အလိုမကျတာ ၊ မကောင်းမြင်တာ၊ အဖျက်စိတ်တွေကို အားပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်. (လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းလည်း တင်ထားပါတယ် တစ်ခါတည်းဖတ်သွားပါနော် )
- သင့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကို စာပေထဲမှာ နှစ်မြုတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ မစဉ်းစားမိအောင် နေကြည့်ပါ.
- တရားထိုင်ခြင်းကလည်း စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်.
- မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားလာပါ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ.
-ရယ်မောခြင်းဟာ လည်း စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပါတယ် . . .
စာဖတ်သူများ စိတ်ပေါ့ပါးပြီး လန်းဆန်းပါစေ..
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, September 13, 2009 8 comments:
ခုတစ်လော မေ16 တစ်ယောက် ခြေဖ၀ါးတွေနာ၊ လက်တွေ ကိုက်ပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အထိုင်များလို့လား မသိဘူး ခါးတွေ၊ ကျောတွေပါ အောင့် နေပါတယ် ဆရာဝန်ဆီသွားရမှာလည်း တီကောင် ဆားနဲ့တို့သလို တွန့်ပါတယ်. . . ဒါနဲ့ သက်သာအောင် လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကို လိုက်ရှာလိုက်တော့ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးထဲမှာ နည်းလမ်းကောင်းလေး တွေကို တွေ့တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ် စာဖတ်သူများကို လည်း ဗဟုသုတ အဖြစ်မျှဝေလိုက်ပါတယ်. . .
၁။ ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းတာ သက်သာအောင် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်ဆင်းထိုင်ပါ. . လက်သီးဆုပ်ကာ လက်ဆစ်ထိပ်တွေနဲ့ ပေါင်ပေါ်ဖိပြီး ဒူးခေါင်းဆီသို့ တဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားပါ. လက်ဆစ်ထိပ်တွေကို ဖိပြီး နဂိုနေရာသို့ ပြန်ရွှေ့ပါ. . . မိမိနာကျင်ကိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို အာရုံထားပြီး တစ်မိနစ်ခန့် နှိပ်သွားပါ. . . . .
၂။ လက်ဖျံကိုက်ခဲတာ သက်သာအောင် ဘယ်ဘက်လက်သီးဆုတ်ကာ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း တံတောင်ဆစ်ကို ကွေးထားပါ. . ညဘက်လက်မကို အပေါ်ဘက်ထားပြီး ညာဘက်လက်မှ ဘယ်ဘက်လက်ဖျံကို ဆုပ်ကိုင်ပါ. . ဘယ်ဘက်လက်ဖျံကို လှည့်ပေးပါ. . . လက်ဖ၀ါးကြမ်းပြင်ဘက် လှည့်သွားပြီး နဂိုနေရာပြန်ထားပါ. . စက္ကန့်၃၀ ခန့် ဆက်လုပ်ပါ. .. နာကျင်တဲ့နေရာတွေဆီ ညာဘက်လှည့်ရွှေ့သွားပါ. . နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းလုပ်ပါ.
၃။ ခါးနာတာသက်သာအောင် ထိုင်ခုံ တစ်ခုပေါ်ထိုင်ပြီး ခြေဖ၀ါး ကိုကြမ်းပြင်နဲ့ ထိထားပါ. . လက်မောင်းကို နောက်ဘက်ကွေးကာ လက်သီးဆုပ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း နောက်ကျော်နေရာမှာထားပါ.. ခါးရိုးတစ်ဖက်တစ်ချက် ခါးအောက်ပိုင်းနေရာကို လက်သီးနဲ့ စက်ဝန်းပုံနှိပ်နယ်ပါ. . တစ်မိနစ်ခန့် နေရာရွှေ့ပြီး လုပ်ပေးပါ. .
၄။ ခြေဖ၀ါးနာကျင်တာ သက်သာအောင် ထိုင်ခုံတစ်ခုပေါ်ထိုင်ပြီး ဘယ်ဘက် ခြေဖ၀ါးအောက်မှာ တင်းနစ်ဘောလုံးထားပြီး ခြေဖ၀ါးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ထားပါ. . ခြေဖ၀ါးကိုကြမ်းပြင်ပေါ် ရှေ့နောက် စက္ကန့် ၃၀ ခန့်လှည့်ပါ ခြေဖ၀ါးကို ပြောင်းလုပ်ပါ. . .
အချိန်မကုန် ငွေမကုန်ပဲ အထက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဝေဒနာများ သက်သာပျောက်ကင်း ကြပါစေရှင်.
ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ. . .
ရေးသားသူ may16 at Friday, September 11, 2009 10 comments:
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, September 09, 2009 12 comments:
ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရာတွင် "လှူဒါန်းခြင်း" သည် အခြေခံဖြစ်သည်. . . သာမန်အားဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်းသည် ရဟန်း သံဃာတော်များအား ပစ္စည်းလေးပါး စသည်တို့ကို လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း၊ အလှူပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များအား ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း၊ မိမိ၏ ကုသိုလ် အဖို့ကို အမျှအတန်းဝေခြင်း ဟူ၍ နားလည်ထားကြသည်. .
စင်စစ် လှူဒါန်းသည် ဆိုရာ၌ အပိုအလျှံရှိသူ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတို့က မရှိဆင်းရဲသားများ အား စွန့်ကြဲ ပေးကမ်း ခြင်းသည်လည်း အကျုံးဝင်သည်. . . ပိုသူကလိုသူအား ဖြည့်ဆည်းပေးကမ်းခြင်းသည် ဘုရားအဆုံးအမ နှင့်လည်း ညီညွတ်ပေသည်. . .
အလှူနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဆိုအမိန့်၊ အဆုံးအများစွာရှိသည့် အနက် အလှူရှင်၏ စိတ်စေတနာ သန့်ရှင်းကြည်လင်ခြင်းသည်လည်းကောင်း ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သည် လဇ္ဖ္စီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ မြတ်သော အလှူထမြောက်ရေး အတွက် ပဓာနလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်. .
အကျင့်သိက္ခာယုတ်နိမ့်သော အလဇ္ဖ္စီပုဂ္ဂိုလ်များအား လှူဒါန်းခြင်းသည် စေတနာ သဒ္ဒါတရား ထားတတ်ပါက လုံးလုံးလျားလျား အချည်းနှီးမဖြစ်စေကာမူ မြတ်သောအလှူဟူ၍ မဆိုနိုင်ချေ. . . .
အလားတူပင် "ရေများရာ မိုးရွာသော အလှူ "၊ "သူဋ္ဌေးကြေးပံ့သော အလှူ "နှင့် "ပြည်ပေါ်မှာ ရွှေကြော်ငြာထုတ်လိုသော အလှူ "တို့သည်လည်း မြတ်သော အလှူဟုမဆိုနိုင်ချေ. . .
ထို့ကြောင့် "ရေးနည်းရာ မိုးရွာသော အလှူ "၊ "ပိုသူကလိုသူကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော အလှူ" နှင့် "လူမသိရင်နေပါစေ ဘုရားသိရင် တော်ပါပြီ" ဟု သဘောထားသော အလှူ တို့သည်ကား မြတ်သောအ လှူဖြစ်ပေသည်. . .
အထူးသဖြင့် လူအများ ကျန်းမာချမ်းသာရေး၊ လူအများ ပညာပြန့်ပွားရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ၊နေရာဌာနများအား လှိုက်လှဲကြည်ဖြူစွာ လှူဒါန်းခြင်းသည် မြတ်သော အလှူ ဧကန်ဖြစ်ပါသည်. . .
ရေးသားသူ may16 at Saturday, September 05, 20099comments:
မနက်ဖြန်မှာကျရောက်မယ့် "တော်သလင်းလပြည့်ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့" ကျင်းပရခြင်း အကြောင်း ကို ရေးသားတင်ပြပါ့မယ်. . . .
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား နုစဉ်အခါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုရုတိုင်းမှာ နေကြတဲ့သူတွေဟာ လူတိုင်းကိုယ်စီ ငါးပါးသီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြတဲ့ အတွက် သူတို့တိုင်းပြည်မှာ မိုးလေ၀သမှန်ကန်ပြီး ကပ်ကြီးသုံးပါးမှ လွတ်မြောက်နေပါတယ်..
ကုရုတိုင်းမှာ မိုးလေ၀သ ညီမျှစွာ ရွာသွန်းနေချိန်မှာ ကာလိင်္ဂတိုင်းပြည်မှာတော့ မိုးခေါင်ပြီး ကပ်ကြီးသုံးပါး ဆိုက်ရောက်လို့ လူရော တိရစ္ဆာန်တွေပါ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်. . . ရှေးမင်းများ ထုံးစံအရ မိုးရွာအောင် အလှူပေးပြီး ဘုရင် ကိုယ်တိုင် ဥပုသ်ဆောင်ဝင်၍ ဥပုသ်သီလာစောင့်ပေမယ့် မိုးကမရွာဘဲနေပါတယ်. .
ကုရုတိုင်းမှာ မိုးရွာနေတာ အဉ္စန၀ဏ္ဏဆင်တော်ကြီးရှိလို့ရွာတာပဲလို့ အယူရှိကြပြီး ဆင်ကြီးကိုရရှိအောင် ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ပြီး ရွှေနှင့်လဲပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်..ဒီတော့ ကုရုဘုရင်က စာနာထောက်ထားပြီး သင်တို့တိုင်းပြည်မှာ မိုးရွာမယ်ဆိုလျှင် ငါ၏ ဆင်တော်ကြီးကို ရွှေနဲ့မရောင်းပဲ အခမဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးပါမယ် ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါတယ်. . . ဆင်ကြီးရောက်တော့လည်း ကာလိင်္ဂတိုင်းမှာ မိုးကမရွာဘဲ ခေါင်မြဲခေါင်နေပြန်ပါတယ်...
ဒီတော့မိုးမရွာတာဟာ ဆင်နဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူး၊ သူတို့ တိုင်းပြည်သားတွေ ကျင့်သုံးတဲ့ ကုရုဓမ္မကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီး အဲဒီတရားကို ရွှေပြားပေါ်မှာကူးခဲ့ရမယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများကို ထပ်မံစေလွှတ်ပြန်ပါတယ်...
၉။ တင်ခြင်းအမတ် ၊
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် ၁၁ ဦးဟာ ငါးပါးသီလကို ထူးထူးခြားခြား စောင့်ကြတဲ့ အတွက် သူတို့ထံမှ ငါးပါးသီလကို ရွှေပြားပေါ်မှာ ရေးပြီးတောင်းလာခဲ့ပါတယ်..
ကုရုဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ ငါးပါးသီလကို ရှင်ဘုရင်ကစပြီး တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ကျင့်သုံးကြတဲ့အခါမှာ မိုးတွေရွာသွန်းပြီး ကာလိင်္ဂတစ်တိုင်းလုံး ကပ်ကြီးသုံးပါးမှာ လွတ်ကင်းပြီး သာယာဝပြောတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်. .
ဂရုဓမ္မဇာတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာ မိုးတွင်းကာလမှာဖြစ်၍ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ကို ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ (ငါးပါးသီလ) အခါတော်နေ့အဖြစ် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်. . .
လူတိုင်းကိုယ်စီ ငါးပါးသီလ မြဲကြပါစေရှင်...
ငါးပါးသီလ အကျိုးနှင့်အပြစ်များကို ဖတ်ရှူလိုလျှင် ညခင်းနှင့်လမင်း မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်ရှင်..
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, September 02, 2009 12 comments:
တတ်လှစွာသော စောင်းသမားသည် စောင်းနှင့်ငါးရက် ကင်းကွာမူ စောင်းတီးပျက်တတ်၏။
တတ်လှစွာသော လေးသမားသည် လေးနှင့် ခုနှစ်ရက် ကင်းကွာမူ လေးမြားချိန်သား ပျက်တတ်၏။
အိမ်သူမယားကောင်းသည် လင်နှင့် တစ်လကင်းကွာမူ အမူအကျင့်ဖောက်ပြားတတ်၏။
တပည့်တို့သည်ကား ဆရာနှင့် တစ်လခွဲမျှ ကင်းကွာမူ ပညာရည်ပျက်တတ်၏။
A good harpist may lose skill after separation of five days from harp.
A good archer may lose skill after separation of seven days from bow.
A good wife may lose in the haviour after separation of one month from her husband.
Pupils may lose in qualification after separation of about halfamonth from teacher.
ကျွဲသည် ရွံ့ညွန်၌သာ မွေ့လျော်၏။
ဟင်္သာသည် ရေကန်၌သာ မွေ့လျော်၏။
မိန်းမသည် ယောကျာ်း၌သာ မွေ့လျော်၏။
ရဟန်းသည် တရား၌သာ မွေ့လျော်၏။
Buffalo delights in mud.
Duck delights in pond.
Woman delights in man.
Priest delights in virtue. (Dhamma)
ထမင်းကို အစာကြေမှ ချီးမွမ်းရာ၏။
မယားကို အရွယ်လွန်မှ ချီးမွမ်းရာ၏။
စစ်သည် ရဲမက်ကို စစ်အောင်ပြီးမှ ချီးမွမ်းရာ၏။
ကောက်နှံစပါးကို ကျီသို့ရောက်မှ ချီးမွမ်းရာ၏။
One should praise meal after being digested.
One should praise wife after she is over age.
One should praise solider after winning battle.
One should praise paddy after being harvest and stored in ware-house.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, September 01, 20096comments: